I-china Auto Ac Compressor kanye ne-Clutch Assembly Manufacture Factory yabakhiqizi nabaphakeli beToyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios | UHollysen
I-Rotary vane compressor, eyaziwa nangokuthi i-scraper compressor, okuwuhlobo lwe-compressor ejikelezayo. Isilinda se-rotary vane compressor sinezinhlobo ezimbili: eyindilinga ne-oval. Ku-compressor ene-rotary enesilinda esiyindilinga, ibanga elingaphakathi nendawo le-eksisi eyinhloko ye-Rotor kanye nendawo yesilinda yenza i-Rotor isondele esikhaleni somoya nasendaweni engaphandle yesilinda.
I-Rotary vane compressor, eyaziwa nangokuthi i-scraper compressor, okuwuhlobo lwe-compressor ejikelezayo. Isilinda se-rotary vane compressor sinezinhlobo ezimbili: eyindilinga ne-oval. Ku-compressor ene-rotary enesilinda esiyindilinga, ibanga elingaphakathi nendawo le-eksisi eyinhloko ye-Rotor kanye nendawo yesilinda yenza i-Rotor isondele esikhaleni somoya nasendaweni engaphandle yesilinda. Ku-compressor ene-rotary ene-cylinder oval, i-axis eyinhloko ye-rotor ihlangana nendawo ye-geometric ye-ellipse, futhi i-rotor iseduze nendawo yangaphakathi yama-axes amafushane we-ellipse. Ngale ndlela, ukuxhumana phakathi kwama-rotor blades kanye ne-axis esemqoka kuhlukanisa isilinda ezindaweni eziningi. Lapho ishafula elikhulu lishayela i-rotor ukuze ijikeleze umjikelezo owodwa, ivolumu yalezi zikhala izokwanda, inciphe, futhi ibuyele kuziro. Ngokunjalo, umhwamuko wesiqandisi kulezi zikhala ujikeleza ukuhogela nokukhipha.
Ku-compressor ene-rotary enesilinda esiyindilinga, impeller ifakwa ngokuqina, futhi isiyingi sangaphandle senkinga sinamathele eduze phakathi kwezimbobo zokungenisa nezokukhipha ebusweni bangaphakathi besilinda. Ku-cylinder elliptical, i-axis eyinhloko ye-rotor ihlangana nendawo ye-ellipse. Amabhande ku-Rotor nolayini wokuxhumana phakathi kwabo ahlukanisa isilinda ngezikhala eziningana. Lapho i-eksisi enkulu ishayela i-rotor ukuze ijikeleze umjikelezo owodwa, ivolumu yalezi zikhala iba noshintsho lomjikelezo we "ukunweba, ukuncipha, futhi kucishe kube zero", umusi wesiqandisi kulezi zikhala nawo uba nomjikelezo wokuncela-ukucindezela-ukuqeda. Irhasi ecindezelwe ikhishwa nge-valve yomhlanga. I-rotary vane compressor ayinayo i-valve yokungenisa, kanti i-vane eslayishayo ingaqedela umsebenzi wokuncela nokucindezela ifriji. Kwisilinda esiyindilinga, amahlamvu amabili ahlukanisa isilinda ngezikhala ezimbili. Umphini omkhulu uzungeza umjikelezo owodwa, kunezinqubo ezimbili zokukhipha, futhi izindwani ezine zinezikhathi ezine. Ama-blade amaningi, ancipha ukushaya kwe-compressor. Ku-cylinder elliptical, izindwani ezine zihlukanisa isilinda ngezikhala ezine. I-eksisi enkulu ijikeleza umjikelezo owodwa futhi kunezinqubo ezine zokukhipha. Ngoba i-valve yokukhipha yakhelwe eduze nolayini wokuxhumana, cishe akukho ivolumu yokuvunyelwa ku-compressor ye-rotary vane.
IToyota Passo / IPerodua Myvi 1.3 / I-Daihatsu Sirion 1.3L (4PK)
IToyota Rush 2006 / IToyota Terios 2004 / I-Daihatsu Terios 2007-2012 (6PK, 105)
IToyota Corolla E12 2.0
Langaphambilini Ac Compressor Manufacture Factory YeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Olandelayo: Isilawuli se-Auto Air Conditioning ne-Clutch For Suzuki Wagon R / Suzuki Jimny / Alto
Auto Ac samandla For Honda N-BOX / Honda Brio ...